ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: စာဖတ်သူ အကျိုးရှိစေဖို့
အိမ်က ဟာမကြီးဖတ်မိပါစေ သတည်းးးးးးး
တစ်နေ့ ထက်တစ်နေ့နီးနီးလာတဲ့ သေဘေးကို ဆင်ခြင်ပြီး အချိန်ကို အရေးကြီးတာ ဦးစီးပေးတတ်ရင်ဖြင့် လူဖြစ်ရကြိုးနပ်ပေစွ.. အသက်ကြီးလေ လောဘကြီးလေ.. အကုသိုလ်ကြီးလေဆိုရင်ဖြင့်.. အင်း...
မည်သူ့ ကိုမှမရည်ရွယ်ပါ။ ကိုယ်ကိုကိုယ်ပြောခြင်းဖြစ်ပါသည်။
I like to read everything. not only the blogspot but also books.
အသက် 40ကျော်ပြီးသော ဦးပေါရှင့်။
ကျန်ရှိတဲ့အချိန်လေးကို အကျိုးရှိရှိအသုံးချနိုင်ရန်clementi ရခိုင်ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွင် ၀ါတွင်းကာလပတ်လုံး စနေ၊တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်း မီးလွတ်တရားစခန်း ကျင်းပနေပါကြောင်း သတင်းပါးရင်းနဲ့ ဖိတ်ခဲ့တယ်နော်။
အာ.... ဘယ်က လေးဆယ်ကျော်ရဦးမှာလဲ။ တနှစ် ကျော်ကျော် လိုသေးတယ်။ ဘဝကို စဖို့ရာ အဝေးကြီးလိုသေး...ဟေး...ဟေး။
ဟုတ်ပါဗျား တို့ အားလုံးလိုလိုက ဂ၀ လောက်အထိ နေရမယ်မှန်း ပြီး လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာတွေ နောက်ရွေ့ ၊ လုပ်ချင်တာတွေပဲ နင်းကန်လုပ်နဲ့ ၊ ဂ၀ မတိုင်ခင် လုပ်သင့်တာမလုပ်ပဲ လောကကို စွန့် သွားသူတွေက အများသား။
ဒါကြောင့်လဲ လောကမှာ လူမိုက်ကများတာလို့ဘုရားဟောတာကိုး။ လူမိုက်အချင်းချင်း မြောက်ကျပင့်ကြ၊ ချီမွမ်းကြနဲ့ ၊ ဒါကြောင့် မိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီးက အရူး ရေနံချီးသုတ်ပြီး နေပူထဲ က တာ ဘေးက ၀ိုင်းပြီး လက်ခုတ်တီးကြ သလိုပဲတဲ့။ ဒါကိုပဲ ကျေနပ်နေကြတာ။ ဒို့ ရောပဲ။း-)
မီးလွတ် ? Does that mean Sushi? :D
ကိုယ်လုပ်ချင်တာလေးတွေ လုပ်နေရရင်ကို ကျေနပ်စရာပါ
ဟုတ်တယ် ... ဖိုရမ်ထဲမှာလဲ စလုံးကလူတွေ အများဆုံးပဲ ... အထူးသဖြင့် ရုံးချိန်ဆို ပိုတောင် စည်သေး။ စနေ၊ တနင်္ဂံနွေ မနက်တွေဆို လူအနည်းဆုံး။ စလုံးကလူတွေ အလုပ်များတယ် Stress များတယ်နဲ့ ရုံးတက်ရင်း အွန်လိုင်းတက်ကြတာဗျား။
အမည်မသိ တီတီဆွိး)
တရားစခန်း တစ်နေကုန်လုပ်ရင် ယောဂီတွေ နေ့လည်စာကျွေးရတယ်လေ။ ၁၂နောက်ပိုင်းမှဆိုတော့ ကျွေးစရာမလိုတော့ဘူး။ အဲဒါကို ဆရာတော်က မီးလွတ်တရားစခန်းလို့ နာမည်သစ်ပေးထားတာ။ :)
ကျွန်တော် သိတဲ့ မီးလွတ် ဆိုတာ … မီးနဲ့ ချက်ပြုတ်ထားတဲ့ အရာမှန်သမျှ မစားရတာလို့ သိထားပါတယ်။ အသီးအနှံကလွဲလို့ ဘာမှ မစားရဘူး။ မွန်းလွဲ နောက်ပိုင်းလည်း ဘာမှ မစားရဘူး။ အလွယ်ပြောရရင် အသီးအနှံသက်သက်ချည်း စားပြီး (၈)ပါး (သို့) (၁၀)ပါးသီလ ဆောက်တည်တယ်လို့ မှတ်နိုင်ပါတယ်။
မှတ်ချက်။ ။ အသီးအနှံကလည်း သဘာဝအတိုင်း ဖြစ်ရပါတယ်။ မီးနဲ့ မှည့်အောင် လုပ်ဆောင်ထားသော အသီးအနှံ မဖြစ်ရပါ။
မီးလွတ်၊ သက်သက်လွတ် ဘယ်ဘုရားမှမဟော။
ကိုယ်ဘာကိုယ် ကျန်းမာရေးကြောင့်စားစား၊ စားချင်လို့ စားစား အကြောင်းမဟုတ်။
သတ်သတ်လွတ်(သို့ ) မီးလွတ် စားလို့ ကုသိုလ်ရတယ်ထင်တော့ ဒိဌိ ဖြစ်ပြီ။
အဲဒီ ကြားထဲ..စလုံး က.. စံတော်ချိန် ကို.. ရွှေ့ ထားလို့.. အချိန် တွေ ကလည်း.. တခြားမှာ ထက်..အကုန်မြန်သေး...။
ကျမ ကတော့..စလုံးမှာ အချိန်ကုန် မြန် သလို ခံစားရလို့.. တြိဂံ နယ်မြေ ကြီးတခုပေါ်များ ကျနေသလား.. အောက်မှာ.. အပေါက်နက် ကြီးမှာ..ရှိနေလား.. လို့ ထင်နေတာ...ဗဟုသုတ များတဲ့..မိတ်ဆွေ တယောက် ပြောမှ.. စံတော်ချိန် ကိုပါ..မဆိုစလောက် ရွှေ့ယူထားတယ် ဆိုပဲ..။ ဒါကြောင့်..ကိုပေါ.. အသက် မြန်မြန် ကြီးနေတာ ဖြစ်မယ်။ အချိန် မနှောင်းခင်.. ကမ္ဘာ့စွဲအား ပြင်ပ က.. ဂြိုဟ် တလုံးလုံး ကို. မိုင်ဂရိတ် လုပ် ပါလား..း))
အဟီးးးးးး ကျနော့ကြောင့်ရှုတ်ကုန်ပြီ။ မှားလို့..မီးလွတ်မဟုတ်ဘူး။ မီးငြိမ်းတရားစခန်း။ အဓိပါယ်(ပနှစ်လုံးမဆင့်တတ်) တူတယ်မှတ်လို့။
စဉ်းစား စရာပါဘဲ..... ကိုပေါ တယောက် လဲ ကိုယ်ဖေါ်တဲ့ ဆေး ကိုယ် သတိပြု မိပါစေ သတည်း....
clementi ရခိုင်ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း? why do u all need to describe race??
want democracy? :D in 1000years.. nga paw yea.. u should cry now!!! :DDDDD